3D Touch iyo Haptic Touch, maxay ku kala duwan yihiin? [VIDEO] | Wararka IPhone
Imaatinka macruufka 13 iyo iPadOS badan oo naga mid ah waxay bilaabeen inay ka baqaan waxa ugu xun, Waxqabadka 3D Touch ee aaladaha la taageeray ayaa ku sii dhawaanayay xadka xad gudubka iyada oo loo rogay Haptic Touch, nidaamka hal abuurka fikradda cusub ee Apple ay rabtay inay naga iibiso oo ay ku siiso dareemayaasha shaashadda hoostooda ku sharaddeeya barnaamijka. Waxa ay ahayd inay dhacaan ayaa dhacay, markii la soo saaray nooc cusub oo iPhone 11 ah, 3D Touch ayaa gebi ahaanba la waayey oo Haptic Touch ayaa u yimid inuu beddelo.
Ma taqaan farqiga u dhexeeya 3D Touch iyo Haptic Touch? Waxaan ku baraynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato iyo sida loo qaabeeyo shaqadan cusub. Maaddaama 3D Touch uusan waligiis soo laabanayn, waxaan si fiican u baraneynaa awoodeeda cusub.
1 Maxay ku kala duwan yihiin 3D Touch iyo Haptic Touch?
2 Faa'iidooyinka Haptic Touch ee 3D Touch
3 Laakiin 3D Touch sidoo kale waxay lahayd faa'iidooyinkeeda ...
4 Sida loo qaabeeyo Haptic Touch iyo 3D Touch
5 3D Touch miyuu si xun ula shaqeeyaa iOS 13?
Maxay ku kala duwan yihiin 3D Touch iyo Haptic Touch?
Waxaan ku bilaabaynaa halyeeygii iyo dabar go'ay 3D Taabasho, nidaam ah in Apple ay ku dhawaaqday wacdaro aad u weyn intii lagu gudajiray soo saarida iphone 6s, kacaanki ugu horeeyay ee ugu weynaa xaga qalabka marka ay timaado la falgalida istcimaalka isticmaalaha ka dib markii la bilaabay shaashadda awooda badan. Runtii, 3D Touch wuxuu leeyahay dareemo taxane ah oo cadaadis hoosta shaashadda ah oo noo ogolaanaya inaan ogaano halka cadaadiska lagu wado iyo inta awood ee shaashadda ah si ay u awoodaan inay muujiyaan waxqabadyo cusub iyo menusyada macnaha guud leh. Sidaas ayuu ku dhashay 3D Touch oo loo isticmaali jiray taleefannada Apple iyo sidoo kale Apple Watch ilaa 2019.
Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in tikniyoolajiyaddani aysan ka dhigin oo keliya qalabka inuu qaali ku noqdo soo saariddiisa, laakiin sidoo kale dayactir iyo horumarin adag. Taasi waa sababta Apple ay u go'aansatay inay ku beddesho 3D Touch beddelka iPhone XR oo markaa hubiso haddii waxqabadkeedu la kulmay buundooyinka ay aasaaseen shirkadda. Asal ahaan taabashada Haptic waxay noqotaa muuqaal barnaamij iyada oo ku saleysan taabashada dheer ee badhanka ku yaal istcimaalka isticmaalaha si loo dhammeeyo bixinta macluumaad la mid ah kan 3D Touch, laakiin hab ka jaban.
Faa'iidooyinka Haptic Touch ee 3D Touch
Taabashada Haptic waxay leedahay xoogaa faa iido ah 3D Touch ee isticmaalayaasha, iyadoo la iska indhatirayo waxtarka ay ku leedahay xisaabaadka shirkadda Cupertino. Tan waxaan uga jeedaa in 3D Touch inkasta oo uu sanado badan nala joogay, haddana wuxuu ahaa wax weyn oo aan la garanaynin maaddaama isticmaaleyaal badani ay ka cagajiidayeen inay bartaan nidaamka cadaadiska ee shaashadaha, in badan oo ka mid ah waxay u muuqatay mid aan dabiici ahayn in si adag shaashadda loogu cadaadiyo. Taabashada Haptic waxay diiradda saareysaa taabashada dheer, wax horeyba ugu jiray macruufka isticmaalaha macruufka sida marka la tirtirayo ama la guurayo astaamaha, taas oo ka dhigaysa mid aad u yaqaan dadka isticmaala.
Faa'iidada kale ee taabashada Haptic waa si sax ah in loogu isticmaali karo aaladaha aan lahayn farsamada 3D Touch shaashadda hoosteeda, taasi waa, waxay si toos ah uga faa'iideysataa dadka isticmaala aaladaha duugga ah iyo kuwa aan is-qaban karin sida Ipadka, halkaas oo taabashada Haptic wax badan ka caawiso heer wax soo saar. Lama inkiri karo, yaa faa iidada badan leh waa Apple, oo keydisa tikniyoolajiyad qaali ah dhanka waxsoosaarka iyo dayactirka, in kasta oo xaqiiqda ah in sicirka si toos ah aysan u saameyn arintan.
Laakiin 3D Touch sidoo kale waxay lahayd faa'iidooyinkeeda ...
Marnaba kama lumin fursad aan ku dhaleeceyno sida soosaarayaasha Android ay u go'aansadeen inay ku daydaan 3D Touch oo leh nidaam si isku mid ah u taabanaya taabashada 'Haptic Touch', runtiina waxaan ku dhowaaday inaan idhaahdo in terminaallo badan oo Android ah ay si fiican u wadaan. 3D Touch wuxuu lahaa faa'iido, waayo-aragnimada isticmaale.
Apple waxay had iyo jeer ogtahay sida loo iibiyo adeegsadayaasheeda khibrad isticmaale oo kala duwan, oo aan cid kale soo saari karin, Tani waxay dhacday, tusaale ahaan, Face ID-ga waxayna ku dhacday waqtigaas 3D Touch, oo nooc kale uusan aqoon sida loo "koobiyo". 3D Touch wuxuu u shaqeeyay si dabiici ah, si dhakhso leh oo raaxo leh. Waxay ahayd qiime lagu daray oo si dhakhso leh u shaqeysay oo kugu kaliftay inaad ku tiirsanaato, adiga oo ku siinaya dareen ah "badhanka jirka" shaashada oo xitaa soo saarayaasha gawaarida ay la midoobeen alaabadooda, baabi'inta 3D Touch ayaa ka dhigeysa iPhone kaliya wax soo saar kale oo foolxun.
Sida loo qaabeeyo Haptic Touch iyo 3D Touch
Este Haptic Touch iyo 3D taabashada menu Way ka duwanaan doontaa iyada oo ku xidhan inaad haysato qalab 3D Touch ah oo la jaan qaadi kara iyo in kale, taasi waa, haddii aad haysato qalab kaliya oo la jaan qaadi kara Haptic Touch, wuxuu muujinayaa inuu yahay "Haptic Touch" iyo taa lidkeed. Tan awgeed waa inaan tagnaa: Dejinta> Helitaanka> Taabashada> 3D iyo jawaab celinta xanta.
Goobahan gudahood haddii aan haysanno qalab 3D Touch ah waan awoodnaa:
Daar hawsha 3D Touch iyo dami
Dheellitir dareenka 3D Taabashada: Jilicsan - Dhexdhexaad - Adag
Ku hagaaji muddada taabashada taabashada Haptic taabashada: Gaaban - Dheer
Tijaabi xasaasiga 3D Touch
Si kastaba ha noqotee, haddii aan haysanno qalab isku habboon kaliya leh Haptic Touch waan awoodnaa:
Tijaabi xasaasiyadda taabashada Haptic
3D Touch miyuu si xun ula shaqeeyaa iOS 13?
Jawaabta degdega ahi waa haa, laakiin way ka yara adag tahay. Sababo la yaab leh awgood Apple ayaa taas go'aansatay 3D Touch iyo Haptic taabashada labaduba waxay isku mar kawada shaqeeyaan aaladahaas la jaan qaada 3D Touch, Tani waxay ka dhigan tahay inay shaqeyn doonto haddii aan sameyno saxaafad adag ama saxaafad dheer, tani waxay keenaysaa dib u dhac yar oo aan fiicneyn oo ku saabsan fulinta hawsha taas oo aan loo isticmaalin dadka isticmaala caadiga ah ee 3D Touch.
Isticmaalayaasha aan caadeysneyn 3D Touch si dhib yar ayey u ogaan doonaan faraqa, laakiin fikrad ahaan, Apple ayaa u oggolaan lahayd dadka isticmaala inay ka joojiyaan 3D Touch ama Haptic Touch dhadhanka macaamilka, hase yeeshe, kaliya 3D Touch ayaa la naafoobi karaa oo Haptic Touch (in kasta oo waxqabadka gaabis ah) uu sii wadi doono inuu shaqeeyo Miyaadse doorbideysaa 3D Touch ama Haptic Taabo?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » 3D Touch iyo Haptic Touch, maxay ku kala duwan yihiin? [VIDEO]
Ogow natiijooyinka doorashooyinka 10N ee ka socda iPhone-kaaga